Sawiro Weeraro Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Bariga Dalka Yemen. – Bogga Calamada.com
Sawiro Weeraro Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Bariga Dalka Yemen.
December 26, 2017 5:35 am Views: 369
Wararka ka imaanaya dalka Yemen waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ay ka dhaceen deegaano ku yaala Bariga dalkaasi.
Weerarka Kowaad oo loo adeegsaday Madaafiic waxaa lagu garaacay Mucaskarka Al-khadraa oo ah mucaskar ay leeyihiin maleeshiyaatka Daba dhilifka Yemen gaar ahaan kuwa ay tababartay dowlada cadowga ah ee Imaaraatka Carabta.
Mucaskarkan madaafiicda lagu garaacay waxa uu ku yaala dhanka Galbeed ee magaalada Mukallah oo ah xarunta Wilaayada Xadra Mowt ee Bariga dalka Yemen,waxeyna wararka laga helayo goobtaasi sheegayaan iney jirto khasaara dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay maleeshiyaatkii lagu duqeeyay saldhigaasi.
Weerarka Labaad oo loo adeegsaday Qarax Miino waxa uu ka dhacay deegaanka Al-maxfad oo ka tirsan gobalka Abyan ee dhanka Konfur Bari dalka Yemen,waxaa qaraxaasi lala beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaatka ay tababartay Imaaraadka Carabta.
Qaraxa ayaa sidoo kale geystay khasaara kala duwan,iyadoona inta badan ilaalada sarkaalka la beegsaday dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi.
Weerarka Sadde-xaad oo isagana loo adeegsaday Madaafiic waxaa lagu garaacay Fariisin ay leeyihiin maleeshiyaatka Ridada ah ee ay tababartay Imaaraatka Carabta kaasi oo ku yaala deegaan dowcan ee wilaayada Xadra Mowt.
Duqeyntaan ayaa sidoo kale geysatay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaartay maleeshiyaatkii ku sugnaay fariisnkaasi.
Mas,uuliyadda weeraradaan culus waxaa sheegtay Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ee ka dagaalamo dalka Yemen oo ah Mujaahidiin taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab.
Halkan Ka Daawo Sawirada Madaafiicda Lagu Garaacay Mucaskarta Galbeedka Mukallah.